Mpamatsy boaty fanomezana & orinasa | Mpanamboatra boaty fanomezana any Shina
Paty manokana miaraka amin'ny ...
namboarina manokana, ...
Fanamboarana ny lamina manarona ...
loko volon-koditra namboarina ...
Volon-koditra namboarina miaraka amina boaty firavaka fanomezana amina kitapo kanto
Boaty firavaka farany avo lenta Ity vokatra ity dia vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra, akorandriaka plastika, fantsom-pifandraisana vy, akora fanangonana, akora telo lehibe misy endrika voapaika, fanjairana zaitra, ary famatsy lakaoly. Ny fisehoana dia feno rivo-piainana lehibe. Ny firafitry ny haingon-trano dia marefo, ary ny firavaka ao anatiny dia afaka mampiseho ny fahatsapana haitraitra avo lenta. Ny fitaovana vita amin'ny hoditra ivelany dia mena, volontany ary mainty, ary ny atitany misy amin'ny loko beige, mainty, mavo, volontany ary loko hafa. ...
Namboarina manokana loko loko perla isan-karazany embossed firavaka fanomezana boaty
Ity vokatra ity dia vita amin'ny taratasy perla manokana, baoritra matevina 3mm, akorandriaka plastika, vy mifamatotra vy, fitaovam-piangonana, manapaka ny endrika takiana amin'ny vy metaly, ary vita amin'ny tanana amin'ny lakaoly mahasarika tontolo iainana. Ny fisehoana dia manasongadina ny vatosoa perila, ny atiny feno rendrarendra ambany, ny ivelany kosa fotsy fotsy, manga manga, volamena, volafotsy, volamena rose, ny atitany mainty, volontany, mena, beige ary loko hafa hisafidianana. ary misy ihany koa ny haben'ny vokatra Araka ny y ...
Boaty fanomezana tsotra Ny anjara toeran'ny boaty fanomezana Endri-javatra mahafinaritra sy tsy manam-paharoa izay afaka mamonosina zavatra, ary boaty fonosana ivelany izay mandravaka sy manome zavatra. Ny boaty fanomezana dia fonosana fanomezana azo ampiharina miaraka amin'ny tanjona lehibe indrindra amin'ny fanomezana fanomezana ho an'ny havana aman-tsakaiza hanehoana fitiavana. Izy io dia fanitarana miasa amin'ny fomba famonosana sy ny filàna ara-tsosialy. Ny boaty fanomezana dia fisehoan'ny fontsika. Ny fanomezana fitiavana izay nataontsika irery na ireo vokatra fitiavana novidinay, tsy misy ...